माध्यमिक र to्गका लागि परिभाषित गाईड - क्रिएटिभोस अनलाइन क्रिएटिव अनलाइन
हामीले भर्खर हेर्‍यौं, हामी क्रिएटिभोस अनलाईनमा आधारभुत डिजाइन उपकरणहरू मनमा राख्न रुचि राख्छौं। सुरुमा, र colors्गहरूको मनोविज्ञान र उनीहरू कसरी प्राप्त गरिन्छन् आवश्यक छ। त्यसकारण, यो दोस्रो निश्चित गाईडमा हामी प्रस्ताव गर्छौं कि हामी सेकेन्डरी र know जान्ने छौं।
यदि केही समय पहिले हामीले यसको निश्चित मार्गनिर्देशन देख्यौं प्राथमिक रंगहरू, हामी यस समयमा माध्यमिक र into्गमा खोलन जाँदैछौं, यदि सम्भव छ भने, डिजाइनको बारेमा तपाईंको शिक्षाको आधारमा। न त तपाईंले आफूलाई डिजाईन वा ललित कला अध्ययन गर्न समर्पित गर्नुपर्नेछ। तपाईंले भर्खर केहि पेन्टि। खर्च गर्नुपर्नेछ, यो मार्गनिर्देशन तपाईंलाई स्पष्ट गर्न कसरी उपयोगी हुनेछ भन्ने महसुस गर्न। र theory्ग सिद्धान्तमा, तपाईंलाई थाहा हुनुपर्दछ कि रंगहरूको मिश्रणले तपाईंको डिजाइनमा अपेक्षित प्रभाव प्राप्त गर्दछ। त्यसोभए यो जान्नु महत्त्वपूर्ण छ कि कहिले पिग्मेन्टेशन वा प्रकाशको कुरा आउँछ।
हामी गौण र doubtsहरू कसरी सिर्जना गर्ने सुरू गर्ने भन्ने आधारभूत शंकाहरूको समाधान गर्न गइरहेका छौं, थाहा पाउँदै, पहिलो स्थानमा, तिनीहरू के हुन्। यसको रंग चक्र र माध्यमिक र secondary्गको परम्परागत मोडेल।
1 दोस्रो रंगहरू के हुन्? तिनीहरूलाई किन यस्तै भनिन्छ?
2 माध्यमिक रंगहरू कसरी गठन हुन्छन्?
3 माध्यमिक र color्ग पा wheel्ग्रा
3.1 पूरक रंगहरू
4 हेक्साडेसिमल कोडमा रंगहरू
4.1 टोनलिटी, मान र तीव्रता
5 दोस्रो रंग: पारम्परिक बान्की
दोस्रो रंगहरू के हुन्? तिनीहरूलाई किन यस्तै भनिन्छ?
यसलाई बुझ्न सजीलो किन माध्यमिक र colors्गहरू किन भनिन्छ, किनकि तिनीहरू दोस्रो स्थानमा आउँदछन्, प्राथमिक प्राकृतिक रंगहरूको मिश्रण पछि। भाषिक शब्दहरूमा यो कुनै चीजबाट उत्पन्न हुन्छ वा प्रिन्सिपलमा निर्भर गर्दछ। यस अवस्थामा प्राथमिक व्यक्तिहरू। यो जहाँ उनीहरूको नाम आउँदछ किनकि तिनीहरू बराबर भागहरूमा दुई प्राथमिक रंगहरूको मिश्रणबाट व्युत्पन्न हुन्छन्।
माध्यमिक रंगहरू, प्राथमिक र colors्गहरू जस्तै, pigmentation को आधारमा दिइन्छ वा प्रकाश जुन प्रदान गरिएको छ। त्यसकारण हामी यसलाई तीन फरक पक्षबाट हेर्नेछौं। घटाउ मोडेलमा रंग रment्गित गर्न सीएमवाईके। आरजीबी लाईट मिक्सिंग द्वारा additive मोडेल को लागी। र, पहिले जस्तै, परम्परागत RYB मोडल जसले यसको दोस्रो रंगलाई विभिन्नमा रूपान्तरण गर्दछ। एक घटाउ तरीकामा, CMYK मोडेलमा दोस्रो रंगहरू रातो, हरियो र निलो भनिन्छ। आरजीबी मोडेलका अनुसार थप स्यान, म्याजेन्टा र पहेंलो हुन् र पुरानो आरवाईबी मोडेलमा तिनीहरू सुन्तला, हरियो र बैजनी हुनेछन्।
माध्यमिक रंगहरू कसरी गठन हुन्छन्?
सीएमवाइके मोडेलका अनुसार, रातो, हरियो र निलो माध्यमिक रंगहरू छन् (RGB):
म्याजेन्टा + पहेंलो = रातो
पहेंलो + स्यान = हरियो
स्यान + म्याजेन्टा = निलो
RGB मोडेलका अनुसार, स्यान, म्याजेन्टा र पहेंलो दोस्रो रंगहरू (CMY) हुन्:
रातो + निलो = मजेन्टा
माथि उल्लेखित अघिल्लो लेखमा जस्तो, RGB र CMYK को माध्यमिक रंगहरू उल्टो छ। केलाई एकको प्राथमिक रंगहरू बनाउँदछ, अर्कोको माध्यमिक र colors्ग र यसको विपरित।
माध्यमिक र color्ग पा wheel्ग्रा
हामीले अघिल्लो पोष्टमा पहिलो व्हील वा क्रोमेटिक सर्कल देख्यौं, जसमा हामी केवल प्राथमिक हाइलाइट गर्दछौं। अधिक पूर्ण सर्कल प्राप्त गर्न, हामीले अधिक रes र र color भिन्नताहरू थप्नु पर्छ। उदाहरण को लागी, निलो, स्यान वा निलो को मामला मा पर्याप्त छैन। हामी निलो-हरियो वा निलो-बैजनी राख्न सक्छौं। यसैले, हामी टोनहरू स्पष्ट पार्नेछौं जुन र wheel्ग पा wheel्ग्राले हामीले लिने दिशा अनुसार बढी विशिष्ट तरिकाले प्रस्तुत गर्दछ। यी रंगहरू द्वितीयक र तृतीयक हुन्। यस अवस्थामा सर्कल निम्न रूपमा बनिनेछ:
रंग चक्रमा, हामी केवल प्राथमिक कोटीहरूद्वारा रंगहरू छुट्याउँदैनौं, माध्यमिक वा तृतीयक। तपाई एक र color र अर्कोको कन्ट्रास्ट पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यी पूरक रंगहरू हुन्।
तिनीहरू एकअर्काको सामना गरिरहेका छन्, अर्थात् हामीले कलर व्हीलमा पहिले हेरेका थियौं, प्राथमिक रंग - इन CMYK- मजेन्टा माध्यमिक र color हरियो को पूरक हो। (यद्यपि त्यो हरी आरजीबीमा प्राथमिक हुनेछ)। र तसर्थ, सबै संग। यस पोइन्टले निश्चित र colorsहरू प्राप्त गर्न समस्याहरू समाधान गर्न ठूलो मद्दत पुर्‍याउँछ हाम्रो मिक्सहरूमा। ररातो हरियोको पूरक हो, पहेंलो बैजनीको पूरक हो, र निलो सुन्तला रंगको पूरक हो। पूरक चरम कन्ट्रास्ट र colorsहरू हुन् र जब एक चित्रमा सँगै प्रयोग गरिन्छ तिनीहरूले उज्यालो र जीवन्त छविहरू उत्पादन गर्न सक्दछन्।
हेक्साडेसिमल कोडमा रंगहरू
हामीले रंग र रंगका बारे प्रकाशको बारेमा कुरा गरेका छौं। र माथिको कसरी ती डिजिटल उपकरणहरूमा यस्तै प्राप्त गर्न सजिलो हुन्छ Photoshop। तर हामीले यी रंगहरूको लागि हेक्साडेसिमल कोड थपेका छैनौं ताकि तिनीहरू मध्ये एकको टोनलिटी कुनै गल्ती नगरी प्रयोग गर्न सकिन्छ। हामी टोनालिटी, मानहरू र गहनताको बारेमा कुरा गर्छौं किनकि स्यान हल्का निलो वा बैजनी निलो जस्तो छैन। न त आजको निलो। निम्न सूचीमा हामी रंगहरूको हेक्सागोनल कोड छोड्न लाग्यौं।
सीएमवाइके: स्यान = # 00FFFF म्याजेन्टा = # FF00FF अमारिल्लो = # FFFF00
RGB: रातो = # FF0000 हरियो = # 00FF00 अजुल = # 0000FF
RYB: रातो = # FF0000 अमारिल्लो = # FFFF00 अजुल = # 0000FF
हामी केहि बच्चाहरू थप्छौं जुन माथि देखाइएको छैन:
RYB: सुन्तला = # FF9C00 बैजनी = # 800080
टोनलिटी, मान र तीव्रता
यी तीन अवधारणाहरू एक हुन् जुन अर्को र colorमा फरक हुन्छ। त्यसकारण यो प्रस्ट हुनु आवश्यक छ कि हामी ती प्रत्येक मध्ये कुन छान्छौं। यसैले टोनलिटीलाई रंगको शुद्ध राज्यको रूपमा सन्दर्भ गर्दै, कालो वा सेतो बिना नै। कुनै रंगको हल्कापन वा अन्धकारको रूपमा मान गर्न। अर्को शब्दहरुमा, अब हो, सेतो वा कालो रंगमा जोड्न। र अन्तमा, तीव्रता भनेको र ofको विविडेन्स हो। यसको जति तीव्रता छ, र color्ग त्यति नै विचित्र देखिनेछ, यदि यसको विपरित हामी अन्य शेडहरू थपेमा, हामी यसको शुद्धता कसरी कम हुन्छौं देख्नेछौं र यो यत्ति धेरै ध्यान आकर्षित गर्न रोकिन्छ।
दोस्रो रंग: पारम्परिक बान्की
परम्परागत मोडेल केही हदसम्म अप्रचलित हो। समय बित्दै जाँदा यसले सीएमवाईके र आरजीबीलाई उनीहरूको बिभिन्न पक्षहरूमा बाटो पुर्‍याएको छ। तर यो यही हो जसले लामो समयदेखि प्राथमिक र of्गहरूको सिद्धान्तलाई समर्थन गर्दछ र त्यसैले माध्यमिक। यस मोडेलमा, हामीले पहिले नै वर्णन गरिसक्यौं कि प्राथमिक रंगहरू रातो, पहेंलो र नीलो छन्।
यद्यपि सुरूमा, यो मोडेलले केवल अहिलेका मोडेलहरू जस्तै तीन र colorsहरू समावेश गर्दैन। सिद्धान्तमा, अरस्तु, डेमोक्रिटस र प्लेटोले तर्क गरे कि त्यहाँ चारवटा आधारभूत र colorsहरू थिए। यो प्रकृति संग यसको सम्बन्धको कारण हो। पृथ्वीको लागि ओचर, आकाशका लागि निलो, पानीका लागि हरियो र आगोको लागि रातो (जुन OBGR, RGBO वा तिनीहरूको अंग्रेजीमा कुनै संयोजनहरू हुनेछ)।
तर, पछि परम्परागत मोडेल RYB मा रह्यो र यसको दोस्रो रंग र Orange्गमा, हरियो र बैजनीमा छाडियो।
रातो + पहेंलो = सुन्तला
पहेंलो + निलो = हरियो
निलो + रातो = बैजनी
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » माध्यमिक र colorsहरूको लागि अन्तिम मार्गनिर्देशन
यस फोटोग्राफरले भियनाको आर्किटेक्चरको सम्मोहन समृद्धि कैद गर्दछ